Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dhismaha warshadaha sabbeynaya ee ugu weyn adduunka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Investments • News • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Xarunta ugu weyn ee sabbaynaysa warshadaha adduunka waxaa lagu magacaabaa OXAGON, waxayna ku taal Sacuudi Carabiya.
Waxay qaadanaysaa aragtida dhaxal-sugaha Boqortooyada Mohammed bin Salman inuu ku xoojiyo mashruucan baaxadda leh 100% tamarta la cusboonaysiin karo.
Tamar nadiif ah, saadka silsiladda saadka casriga ah ee OXAGON si ay u taageerto la-hawlgalayaasha ganacsiga
OXAGON si ay u soo dhaweyso hormoodka warshadaha laga bilaabo 2022
Toddoba warshadood oo muhiim ah oo ay taageerto tamarta dib loo cusboonaysiin karo si ay u taageeraan horumarinta warshadaha
Naqshad octagon gaar ah waxay taageertaa horumarinta dhaqaalaha buluuga ah ee NEOM
Dhaxal sugaha Boqortooyada Mohammed bin Salman, Amiirka leh dhaxalka iyo Guddoomiyaha Guddiga Maamulka Shirkadda NEOM, ayaa maanta ku dhawaaqday aasaaska OXAGON, samaynta wejiga xiga ee qorshaha guud ee NEOM oo ka dhigan qaab cusub oo xagjir ah oo loogu talagalay xarumaha wax soo saarka mustaqbalka, taas oo ku salaysan xeeladaha NEOM ee dib-u-qeexidda habka bani'aadamnimada iyo shaqada mustaqbalka.
Mar uu ka hadlaayay ku dhawaaqista dhismaha magaalada, ayaa waxa uu yidhi. "OXAGON waxay noqon doontaa kicinta kobaca dhaqaalaha iyo kala duwanaanta NEOM iyo Boqortooyada, sii xaqiijinta hamigayaga hoos yimaada Higsiga 2030. OXAGON waxay gacan ka geysan doontaa dib-u-qeexidda habka adduunka ee horumarinta warshadaha mustaqbalka, ilaalinta deegaanka iyada oo loo abuurayo shaqo iyo kobac NEOM. Waxa ay gacan ka gaysan doontaa ganacsiga gobolka Sucuudiga iyo ganacsiga, iyo taageeridda abuurista goob cusub oo isu-socodka ganacsiga caalamiga ah. Waxaan ku faraxsanahay in aan arko in ganacsigii iyo horumarku ka bilaabmay dhulka, waxaanan rajaynaynaa in magaaladu si xawli ah u fiddo.”
Nadhmi Al-Nasr, madaxa NEOM, ayaa yiri: “Iyada oo loo marayo OXAGON, waxaa jiri doona isbeddel aasaasi ah oo ku saabsan sida adduunku u arko xarumaha wax soo saarka. Waxa na dhiirigelinaya waa in aan aragno xamaasadda tiro ka mid ah hay'adaha aan wada shaqayno kuwaas oo muujiyay rabitaan ay ku doonayaan inay mashaariicdooda ka bilaabaan OXAGON. Hormoodyadan isbeddelku waxay dhisi doonaan warshado, oo lagu horumariyay tignoolajiyada ugu dambeeyay ee sirdoonka macmal, si loo gaadho horumar la taaban karo xilligan oo loo galay Kacaankii Warshadaha ee Afraad. Sida LINE-ka, OXAGON waxay noqon doontaa magaalo garasho dhamaystiran oo siisa nolol aan caadi ahayn dadka deggan.
Ka kooban dhul ballaaran oo ku yaal geeska koonfur-galbeed ee NEOM, deegaanka xudunta u ah magaalada waxa uu xuddun u yahay dekedda isku dhafan iyo xarunta saadka taasoo hoy u noqon doonta inta badan dadka magaalada ee la filayo. Naqshadda octagonal gaar ah waxay yaraynaysaa saamaynta deegaanka waxayna bixisaa isticmaalka dhulka ugu wanaagsan, iyadoo inta soo hadhay ay u furan tahay in la ilaaliyo 95% deegaanka dabiiciga ah. Sifada qeexan ee magaaladu waa qaab dhismeedka sabbaynaya aduunka ugu wayn, kaas oo noqon doona xarun NEOM's Blue Economy oo gaadho koboc waara.
OXAGON waxay dhamaystiraysaa isla falsafada iyo mabaadi'da LINE-ka (oo lagu dhawaaqay Janaayo 2021) waxayna bixin doontaa nolol aan caadi ahayn oo waafaqsan dabeecadda. Sida ku habboon waxay ku taal badda cas ee u dhow marinka Suweys, halkaas oo ku dhawaad ​​13% ganacsiga dunidu marayo, OXAGON waxay noqon doontaa mid ka mid ah xarumaha saadka ee ugu horumarsan xagga tignoolajiyada oo leh deked isku dhafan oo casri ah iyo garoon diyaaradeed.
OXAGON si ay u dejiso halbeegyada caalamiga ah ee tignoolajiyada horumarsan
OXAGON waxay dhisi doontaa dekedii ugu horeysay ee si buuxda isugu xidhan iyo nidaamka deegaanka silsilada saadka ee NEOM. Dekadda, saadka iyo goobta gaarsiinta tareenada waa la mideyn doonaa, iyadoo la siinayo heerar wax soo saar heer caalami ah oo leh qiiqa kaarboon- eber ah, dejinta jaangooyooyinka caalamiga ah ee qaadashada tignoolajiyada iyo sii jirista deegaanka.
Silsilada saadka jirka iyo dhijitaalka ah ee isku dhafan iyo nidaamka saadka ayaa u oggolaanaya qorsheynta waqtiga-dhabta ah, taasoo keentay in la helo waqti sugan oo sugan, hufnaan iyo waxtarka-wax-ku-oolnimada la-hawlgalayaasha warshadaha.
Xudunta OXAGON waxay noqon doontaa qaadashada tignoolajiyada ugu horumarsan sida Internet-ka Waxyaabaha (IoT), isku-dhafka mashiinka-bini-aadmiga, sirdoonka macmal iyo saadaalinta, iyo robotics, kuwaas oo dhammaantood lagu lamaan yahay shabakad si buuxda u otomaatig ah xarumaha qaybinta iyo madax-bannaanida hantida gaarsiinta mile-da ugu danbeysa si loo dhaqaajiyo hamiga NEOM ee abuuritaanka silsilad sahay ah oo isku dhafan, caqli badan oo hufan.
Toddoba waaxood oo hal-abuur leh, oo dhammaantood ku shaqeeya 100% tamarta la cusboonaysiin karo
Magaalada net-eber waxay ku shaqayn doontaa 100% tamar nadiif ah waxayna noqon doontaa barta xudunta u ah hogaamiyayaasha warshadaha kuwaas oo raba inay hormuud ka noqdaan isbeddelka si ay u abuuraan warshado horumarsan oo nadiif ah mustaqbalka.
Todoba qaybood ayaa ah xudunta u ah horumarka warshadaha ee OXAGON, oo leh hal-abuurnimo iyo tignoolajiyad cusub oo saldhig muhiim u ah warshadahan. Warshadahani waa tamar waara; dhaqdhaqaaqa madaxbannaan; hal-abuurka biyaha; wax-soo-saar cunto oo joogto ah; caafimaadka iyo ladnaanta; tignoolajiyada iyo wax soo saarka dhijitaalka ah (oo ay ku jiraan isgaarsiinta, tignoolajiyada hawada sare iyo robotics); iyo hababka casriga ah ee dhismaha; dhammaan waxa ku shaqeeya 100% tamar dib loo cusboonaysiin karo.
Bulshooyinka lagu dhex milmay dabeecadda
Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka LINE-ka ee bixiya nolol aan caadi ahayn ayaa ka muuqda muuqaalka magaalada OXAGON. Bulshooyinku waxay noqon doonaan kuwo lagu socon karo, ama iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa ku shaqeeya hydrogen-ka. Warshadaha waara waxaa laga dhisi doonaa agagaarka bulshada, iyadoo la yareynayo waqtiga safarka iyo bixinta nolol aan caadi ahayn iyadoo dabeecadda si aan kala go 'lahayn loogu biirin deegaanka magaalada.
Waxbarashada, Cilmi-baarista iyo Hal-abuurka xarumaha caalamiga ah
OXAGON waxay hal-abuuri doontaa si ay u abuurto dhaqaale wareeg ah oo dhab ah oo leh jawi iskaashi oo lagu dhisay cilmi-baadhis iyo hal-abuurnimo: Xarunta hal-abuurka ee OXAGON waxay martigelin doontaa nidaamka deegaanka Waxbarashada, Cilmi-baadhista iyo Hal-abuurka (ERI) si ay ula tartanto xarumaha caalamiga ah ee la aasaasay.
Horumarinta OXAGON ayaa si habsami leh u socota, waxaana socda naqshadaynta xarumaha waaweyn ee wax soo saarka. Xarumahan waxaa ka mid ah mashruuca hydrogen-ga cagaaran ee ugu weyn adduunka ee ku lug leh Alaabta Hawada, Awoodda ACWA iyo NEOM hawl-gal saddex-geesood ah; warshad dhismo casri ah oo aduunka ugu wayn uguna horumarsan oo leh Gulf Modular International; iyo xarunta ugu weyn ee xogta hyperscale ee gobolka, oo ay iska kaashadeen FAS Energy iyo NEOM.
Iyada oo leh nidaamka nidaaminta heerka ugu wanaagsan ee noociisa ah ee taageerada ballaaran, OXAGON waxay u kori doontaa si degdeg ah waxayna soo dhaweyn doontaa kireysteheedii ugu horreeyay ee wax soo saarka bilowga 2022.
NEOM waa dardar geliya horumarka aadanaha iyo aragti ah sida uu u ekaan karo mustaqbalka cusub. Waa gobol ku yaal waqooyi-galbeed Sacuudi Carabiya oo ku taal badda cas oo laga dhisayo dhulka hoostiisa sida shaybaarka nool - meel uu ganacsigu jaangooyo koorsada Mustaqbalka Cusub. Waxay noqon doontaa meel ay u socdaan iyo guri dadka ku riyoonaya aadka u weyn oo doonaya inay qayb ka noqdaan dhisidda qaab cusub oo loogu noolaado gaar ah, abuurista ganacsiyo horumarsan iyo dib u soo noolaynta ilaalinta deegaanka.
NEOM waxay noqon doontaa guriga iyo goobta shaqada in ka badan hal milyan oo degganeyaal adduunka oo dhan ah. Waxaa ka mid noqon doona magaalooyinka iyo magaalooyinka garaadka, dekedaha iyo goobaha ganacsiga, xarumaha cilmi-baarista, ciyaaraha iyo madadaalada, iyo meelaha loo dalxiis tago. Xarun u ah hal-abuurnimada, ganacsatada, hogaamiyayaasha ganacsiga iyo shirkaduhu waxay u iman doonaan cilmi-baadhis, soo saarid, iyo ganacsiyaynta tignoolajiyada cusub iyo ganacsiyada siyaalo aasaasi ah. Dadka deggan NEOM waxay dejin doonaan hab-dhaqan caalami ah waxayna qaadan doonaan dhaqanka sahaminta, khatarta-qaadista iyo kala duwanaanta - dhammaan waxaa taageeraya sharci horumarsan oo la jaan qaadaya xeerarka caalamiga ah oo ku habboon kobaca dhaqaalaha.